Aluminium titanium aluminium, Al-Ti - Goodao Technology Co., Ltd.
Guryaha titanium iyo aluminium:
Sidaa darteed, waxay soo jiidatay fiiro gaar ah waxayna noqotay diiradda cilmi baarista ee ku saabsan aaladda loo yaqaan 'earale alloy'.
Daawaha aasaasiga ahi wuxuu leeyahay sifooyin wanaagsan oo jidh ahaaneed iyo farsamo ahaanba wuxuuna leeyahay faa'iidooyin muuqda oo ka sarreeya aaladda caadiga ah ee titanium iyo superalloys. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin iskudhafyada isku-dhafan ee Ti-Al ayaa ka sarreeya Ti alloys-ka dhinacyada oo dhan, taas oo ahmiyad weyn u leh qalabka duulista hawada. Sababtoo ah saameynta isku xirnaanta wadajirka ah, guryaha heerkulka sare ee faafitaanka la xiriira, sida gurguurta, xoogga waara iyo adkaanta jabka, waa la horumarin karaa. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay heerkul heer sare oo heer sare ah oo u adkaysi iyo u adkaysiga daxalka, sidaa darteed waa qalab heer-kul sarreeya oo qaab-dhismeed leh awood weyn.
Isticmaalka titanium iyo aluminium:
Daawaha Titanium ayaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha dahaadhka faakiyuumka. Waxaa laga dhigi karaa qayb gaar ah oo ah walxaha bartilmaameedka daawaha ah sida walxo cayriin ah oo loogu talagalay maqaarka maqaarka. In geeddi-socodka samaynta waxyaabaha bartilmaameedka daahan faaruqinta, aluminium titanium aluminium waxay leedahay saamiyado kala duwan oo qayb ahaan ah, saamiga caadiga ah ee aluminium aluminium (at%): 90:10, 80: 20,70: 30, 50:50, 30:70 , 20:80, 10:90. Daawaha aluminium ee Titanium waxaa lagu soo saari karaa tuubista faakiyuumka marka waxyaabaha ku jira atamka atomku ka badan yahay ama u dhigmayaan 50%. Marka ay ka kooban tahay maadada titanium-ka oo ay ka kooban tahay aluminiumku, waxaa lagu soo saari karaa oo keliya budada metallurgy-ka si loo buuxiyo shuruudaha agabka bartilmaameedka. Markay atamyada titanium ka weynaadaan ama u dhigmaan 80%, isku-darka titanium sidoo kale waa la been-abuuri karaa oo la rogi karaa.
Hore: 211Niobium Aluminium Carbide, Nb2AlC
Xiga: Daawada Tungsten-chromium, W-Cr
Daawaha Aluminium ee Titanium
Warshadaha Daawaha Aluminium ee Titanium
Warshadda Daawada Aluminium ee Titanium
Soo-saaraha Daawaha Aluminium
Soo-saareyaasha Daawaha Aluminium ee Titanium
Qiimaha Daawaha Aluminium ee Titanium
Xigashooyinka Daawaha Aluminium ee Titanium